Reviews Archives — Anycall Mobile
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ မနေ့ကလိုမျိုး ဖုန်းလိုင်းတွေ အကုန် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ အရေးပေါ်သုံးလို့ရမယ့် Offline Chat App တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် App လဲဆိုတော့ အားလုံးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ (လိုင်းပေါ်မှာလည်း ပြန်နေ့ပြီပေါ့နော်)…
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ S21 Ultra နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှမပြောခင် ဒီနှစ်ကတော့ Samsung ဖုန်းတွေ ရေလည်ပြောင်းလဲလာတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှတွေ့လိုက်ရတဲ့ Galaxy A12 မှာ ဈေးနည်းနည်းနဲ့ 6/128GB Variant…
OnePlus အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ July လောက်တုန်းက သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး 5G Mid-range ဖုန်းလို့ပြောရမယ့် OnePlus Nord ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ ဒီ OnePlus Nord ထွက်ပြီးနောက် ၃ လအကြာမှာတော့ OnePlus…
ဒီနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ OnePlus 8 Series ရဲ့အောင်မြင်မှုန‌ဲ့အတူ OnePlus ကတော့ သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ OnePlus 8T မကြာသေးခင်ကမိတ်ဆက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ OnePlus 8T ဟာဆိုရင် OnePlus ရဲ့ T…
အခုလက်ရှိမှာ Samsung ဟာ Android Tablets တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Tablet တွေကိုထုတ်နေတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဉပမာအနေနဲ့‌ေပြာရရင် လည်း Android Tablet တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး Experience ပေးနိုင်တဲ့ မနှစ်က Tab…
Brawl Stars သို့ Mobile Games တွေထဲက အကောင်းဆုံး ဂိမ်းတစ်ခု ??
Supercell ကထုတ်တဲ့ CoC (Clash of Clans) နဲ့ Clash Royale လိုဂိမ်းမျိုးတွေကို ဆော့ဖူးတဲ့သူ‌တွေရှိကြလား ? ရှိတယ်ဆိုရင် Brawl Stars ဆိုတဲ့ Game တစ်ခု ကိုစမ်းဆော့ကြည့်ကြမလား? စမ်းဆော့ကြည့်ရအောင်…
Redmi ရဲ့ Note series တွေဟာ Price to Perfornance ဖြစ်တာကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ Series ကိုပြောရရင် 8 Series ပါ။ သူ့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ 2019 September…
စမတ်ဖုန်း အသုံးပြူသူတွေကြားမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နှိုင်းယှဥ် ငြင်းခုန်လို့ မပြီးနိုင်မစီးနိုင်သေးတဲ့ ကိစွက‌တော့ Android နဲ့ iOS ဘယ်တစ်ခုက ဘယ်တစ်ခုထက် ပိုကောင်းကြောင်း ပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ စမတ်ဖုန်း အသစ်တစ်လုံး ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ‌Google ရဲ့ Android…